चीन ढीला विनाइल फ्लोरिंग निर्माता र आपूर्तिकर्ता कार्ल्टर
वस्तु: उच्च गुणस्तर mm मिलिमिटर मोटो ढीला लेन Vinyl पट्टि फर्श
वारेन्टी6बर्ष भन्दा बढी
बिक्री पछि सेवा अनलाइन टेक्निकल समर्थन
सतह उपचार UV कोटिंग
उत्पाद प्रकार लुज भिनाइल प्लान्क
सतह गहिरो एम्बोसिंग / हात स्क्र्याप गरियो
स्थापना छाला राख्नु
लेयर लगाउनुहोस् ०. / / ०.। मिमी
आकार ”" X48 ”"
प्याकिंग दफ़्ती + फूस
लूज ले कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ?
भान्छाघर, बाथरूम, लाउंज, जिम, हल, शयनकक्ष, अध्ययन र तहखाने
छिटो र स्थापना गर्न सजिलो
लूज ले सजिलैसँग सपाट, चिल्लो, सुख्खा र धुलो रहित subfloors मा स्थापित गर्दछ। लूज लेट विनाइल फ्लोरिंग स्थापना समय घटाउन र अन्डरफ्लोर उपयोगिताहरूमा पहुँच अनुमति दिनको लागि विकसित भएको छ। सही सर्तहरूमा यी टाईल्सहरू कुनै पनि चिप्लिपीएको बिना सबफ्लोरमा राख्न सकिन्छ। यसले सबैलाई र सबैको लागि सजिलो स्थापना विकल्प बनाउन मद्दत गर्दछ।
लुज ले बारे थप
लुज ले ले विनाइल प्लान्क्स बाक्लो विनाइल आयताकारहरू छन् जुन रबरको ब्याकि .सँग हुन्छ जुन चिल्लो सतहमा समतल हुन्छ।
के लुज ले भिनाइल प्लान्क्सलाई अन्य उत्पादनहरू भन्दा यति फरक बनाउँदछ कि यसले फास्टनरहरू, चिपकने, वा जिब्रो र ग्रूभ म्याकेनिमेसनको आवश्यकता पर्दैन जुन ठाँउमा पट्टि राख्दछ। बाक्लो विनाइल आयत फल्याकहरू भुइँमा स्थितिमा राख्दछन् र एक पटक स्थापना भएपछि त्यहि रहन्छन्।
यस किसिमको विनाइल फ्लोरिंग अवस्थित फ्लोरिंगमाथि धेरै सरल र चाँडो राख्न सकिन्छ।
लुज ले भिनाइल प्लान्कको लागि स्थापना प्रक्रिया
लुज ले भिनाइल प्ल्याक्सको पछाडि घर्षण प्रयोग गर्दछ यसको तल सबफ्लोरको पकड प्राप्त गर्न। सबफ्लोर तयार हुन आवश्यक छ र सुक्खा, चिल्लो, स्तर, सफा, र धूलो रहित हुनु पर्छ। स्थापनाकर्ताहरूले मात्र स्थितिमा लूज ले भिनिल फ्लोरिंग सेट गर्न आवश्यक छ र यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि प्रत्येक फल्याक र भित्ता बिचको एक कडा फिट छ।
अन्तिम टुक्राहरू फिट हुनको लागि फल्याकहरू काट्नु पर्छ। यद्यपि त्यसो गर्न कुनै विशेष प्रशिक्षणको आवश्यक पर्दैन।
लुज ले भिनाइल पट्टिको फाइदाहरू
लुज ले ले भिनिल फ्लोरिंग यो एक लोकप्रिय विकल्प बन्न गइरहेको छ यसले प्रदान गर्ने लाभहरूको अपीलिंग नम्बरको कारण।
उल्लेख गरिए अनुसार, यस प्रकारको फर्शिंग स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ। त्यहाँ गोंद, स्टेपल, वा क्लिक-लक प्रणालीको लागि कुनै आवश्यकता छैन। स्थापनाकर्ताहरूले केवल स्थितिमा प्लेनहरू सेट गर्छन्। स्थापना को सजिलो को कारण, यो काम पूरा गर्न को लागी धेरै समय लाग्दैन र परिणाम स्वरूप कम तिर्न सामान्य छ।
यस फ्लोरिंग समाधानको अर्को विशेषता यो हो कि यो पोर्टेबल हो। यो हटाउन सकिन्छ र सजिलै अर्को स्थानमा पुन: स्थापना गर्न सकिन्छ। अधिकांश अन्य फ्लोरिंग समाधानहरूले यो सुविधा प्रदान गर्दैन।
यस विकल्प हुनु भनेको यसको मतलब यो हो कि तपाईं यी कोठाहरूलाई बिभिन्न कोठामा सार्न सक्नुहुनेछ वा यस फ्लोरलाई आफूसँग लैजान सक्नुहुनेछ यदि तपाईं घरहरू सार्नुभयो भने, धेरै आन्तरिक डिजाइन सम्भावनाहरू सिर्जना गर्दछ र सम्भावित रूपमा लामो समयसम्म तपाईंको पैसा बचत गर्दछ।
अघिल्लो: विनाइल फ्लोरिंग तल गोंद
१२.० मिमी लमिनेट फ्लोरिंग
.0.० मिमी एसपीसी विनाइल फ्लोरिंग
.0.० मिमी लमिनेट फ्लोरिंग